Fahafahana misoratra anarana farany: Atrikasa antsasakadiny rahampitso | Martech Zone
Alatsinainy, 16 Jona, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manantena ny hiresaka amin'ny namana tsara mpivady, ao anatin'izany Kyle Lacy, eto Indianapolis rahampitso amin'ny atrikasa: Tambajotra sosialy an-tserasera ho anao sy ny orinasanao.
Hanomboka amin'ny: Maninona ny tambajotra sosialy dia endrika fifandraisana matanjaka amin'ny orinasa ary ny tambajotra sosialy no mety indrindra amin'ny orinasanao sy ny tanjonao natolotr'i Sarah “Intellagirl”Robbins.
Fiarovana sy fiarovana - Inona no ambaratonga fiarovana sy fiarovana azonao amin'ny tambajotra sosialy?
Fikojakojana ny marika - Ahoana ny fitazonana ny marikao amin'ny tambajotra sosialy? Ahoana no hataonao polisy?
Tambajotra sosialy anatiny - Ahoana ny fampiasana tambajotra sosialy hamoronana resadresaka eo amin'ireo mpiasa ao anatiny?
Fiantraikany an-tserasera - Ahoana ny fandrefesana ny fiantraikan'ny marketing amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ary inona no azony lazaina aminao?
Tambajotra sosialy sy haino aman-jery hafa - Ahoana ny fomba fampifangaroana ny tambajotra sosialy amin'ny media sosialy hafa?
Hands on Session - Mamorona tambajotra sosialy anao miaraka amin'ny fanampian'ny mpiasan'ny MediaSauce.
Hikatona amin'ny fifanakalozan-kevitra tontosa ny andro, Fiarovana amin'ny laoniny amin'ny Internet. Raha te hisoratra anarana ianao dia alao amin'ny vatanao ny vatanao!